ဗင်နီဇွဲလား၏အစဉ်အလာ, ဗင်နီဇွဲလားအစဉ်အလာဘာတွေလဲ? | Absolut ခရီးသွားခြင်း
ဗင်နီဇွဲလား Absolut | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 29/03/2019 14:47 | ဗင်နီဇွဲလား
ဗင်နီဇွဲလားသည်ယဉ်ကျေးမှုသုံးမျိုးရောထွေးသည့်ကြွယ်ဝသောနိုင်ငံဖြစ်သည် စပိန်၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်အာဖရိကန်များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသက်သေပြနိုင်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်စပိန်နှင့်အာဖရိကနိုင်ငံများမှပြည်ပမှယူဆောင်လာသည့်ဗင်နီဇွဲလား၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများဖြစ်သည်။ ဌာနေယဉ်ကျေးမှုသည်တိုင်းပြည်၏လူကြိုက်များသောဓလေ့ထုံးစံများကိုများစွာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ဗင်နီဇွဲလားတွင်တည်ရှိနေသောကွဲပြားသောဌာနေတိုင်းရင်းသားများဘယ်မှာငါတို့ရှာပါ Warao အရှိဆုံးကိုယ်စားလှယ်အမျိုးအနွယ်အဖြစ် အဆိုပါ Yanomamis နှင့်အတူတိုင်းပြည်၏။
လူများစွာသည်ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများကိုဆင်တူကြသော်လည်းတစ်ခုစီတွင်မတူညီသောမူရင်းရှိသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ထုံးစံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောဗင်နီဇွဲလား၏အလေ့အကျင့်ကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ် တစ် ဦး ကလူအဖြစ်သူတို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြောင်းအမြစ်တွယ်။ ဗင်နီဇွဲလားရိုးရာအစဉ်အလာအများစုသည်ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့်တိုင်းရင်းသားဌာနေတိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။ areaရိယာတစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ဓလေ့ထုံးစံများ၊ သူတော်စင်အပေါ်ထားရှိမှု၊ ကျော်ကြားသောဒဏ္endsာရီများနှင့်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များသောပွဲတော်များကိုပြသထားသည်။
အဲဒီအစားဗင်နီဇွဲလားအစဉ်အလာ သူတို့သည်အကြီးအကဲများမှအမွေရရှိထားသောယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားသည်။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသရုပ်သကန်များသည်မျိုးဆက်မှမျိုးဆက်သို့ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားပြီး၎င်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားဂိမ်းများ၊ အစားအစာများ၊ စကားများ၊ တေးဂီတတူရိယာများ၊ အကများနှင့်အတိတ်ကိုစည်းလုံးစေသောအရာများစွာကိုပျော်မွေ့စေသည်။ ဗင်နီဇွဲလားထုံးတမ်းစဉ်လာအရတိုင်းပြည်ကိုဖွဲ့စည်းသောပြည်နယ်အသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်အမြောက်အများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်စားလှယ်များကိုအများဆုံးစုစည်းရန်ကြိုးစားသွားမည်။
3 Santa Ana ပုခက်
6 ဗင်နီဇွဲလား၏အစဉ်အလာ၏အခြား Sardin ၏သင်္ချိုင်း
8 Caracas မီးဖို
9 အဆိုပါ San Sebastiánတရားမျှတသော
10 Tacarigua မှ Papelones
13 Bud ဦး ထုပ်
14 ဆေးရွက်ကြီးနှင့် calillas
15 ဗင်နီဇွဲလား artisan အစဉ်အလာ
ရိုးရာဗင်နီဇွဲလားဗိသုကာပေါင်းစပ်သည် ပြည်ပမှယူဆောင်လာသည့်မတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတူရိုးရာဌာနေတိုင်းရင်းသားများယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံ၏အခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အတူတူပင်။ အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအပြင်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်များသည်ဘိုးဘေးများအသုံးပြုခဲ့သည့်အရာများနှင့်တူညီသော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် orthographic ပြောင်းလဲမှုများကိုသူတို့တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်သည်။
သစ်သား၊ ကြံနှင့်ကောက်ရိုးတို့နှင့်အတူနိုင်ငံ၏မတူညီသောလူမျိုးစုများက၎င်းတို့အခြေချနေထိုင်ရာမြို့များကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်နိုင်ငံ၏အရှေ့တောင်ခြမ်းတွင်တွေ့ရသောအဓိကပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ မြစ်ချောင်းများရေသွင်းပေးသောနေရာများတွင်မြစ်ကမ်းပါးတွင်တည်ဆောက်ထားသောရေပေါ်အိမ်များကိုကျောက်တုံးအိမ်များဟုခေါ်သည် အတိတ်ကာလကဲ့သို့တူညီသောပစ္စည်းများနှင့်အတူတည်ဆောက်နေကြသည်.
တောင်တန်းဒေသများ၌အိမ်များသည် c ကိုမှီခိုရန်နေရာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါအစစ်အမှန်နေအိမ်များဖြစ်လာသည် အခန်းတစ်ခန်းနှင့်စင်္ကြံတစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောစင်္ကြံတစ်ခုပါရှိသည်။ တောင်တန်းများတွင်ဤကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြနာမှာ၎င်းတို့တည်ရှိရာမြေအနေအထားကန့်သတ်ချက်များဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သွားရောက်လေ့လာသည့်နိုင်ငံ၏မတူညီသောareasရိယာများ၊ အင်ဒီးစ်၊ ကမ်းရိုးတန်း၊ တောတွင်းများသို့မဟုတ်လွင်ပြင်များပေါ် မူတည်၍ နေ့၏အချိန်ပေါ် မူတည်၍ ဒေသခံများသည်မတူညီသောသီချင်းများကိုမည်သို့တီးမှုတ်နိုင်သည်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ပုံမှန်ရိုးရာသီချင်းများ ဒေသခံများနှင့်အတူနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအတှေ့အကွုံပြသပါ။ ထိုသီချင်းများကိုကွင်းဆင်းနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အတူစည်းချက်ညီသောသီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်ဖန်တီးထားသည်။ ဤသီချင်းများသည်ကိုလိုနီခေတ်မှဆင်းသက်လာပြီးကျွန်အရောင်အနက်ရောင်ကျေးကျွန်များကိုလယ်ကွင်းများတွင်အသုံးချပြီးသူတို့၏ ၀ မ်းနည်းမှု၊ ရွှင်လန်းမှု၊ အတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြရန်ထိုသီချင်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Santa Ana ပုခက်
တစ် ဦး က chinchorro သောပုံမှန်ပိုက်ကွန်သည် နှစ်ဖက်စလုံးမှအဆုံးတွင်နာရီပေါင်းများစွာအိပ်ရန်သို့မဟုတ်အနားယူရန်လည်းကြိုးပုခက်အဖြစ်လူသိများ။ ၎င်းသည် Moriche ချည်မျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနိုင်ငံ၏ပုံမှန်လက်မှုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ပထမ chicharros များကိုယခုခေတ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းကွက်လပ်များကိုယက်လုပ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားထုံးထည်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့လိုချင်သောအရွယ်အစားဖြစ်စေခြင်းငှါမြေပြင်၌ကပ်ထားသောချောင်းနှစ်ချောင်းကိုကြိုးသုံးချောင်းဖြင့်ဖြတ်သွားသည်။
ဗင်နီဇွဲလား၌တည်ရှိနေသောရိုးရာအကများသည်များစွာသောဥရောပအမွေအနှစ်များအထူးသဖြင့်စပိန်လူမျိုးများနှင့်အာဖရိကမှအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကတစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည် သူတို့သည်ယုံကြည်သူ၊ ရွှင်လန်းသောဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏မက်စတီဇို၏အနှစ်သာရကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားရိုးရာအကများမှာSebucánသို့မဟုတ် Palo de Cinta၊ Turas နှင့် Maremare တို့ဖြစ်သည်။
Sebucánသို့မဟုတ်ဥရောပမှဆင်းသက်လာသောဖဲကြိုးများအထူးသဖြင့်နွေ ဦး ရာသီရောက်သည့်အခမ်းအနားများနှင့်အတူသစ်ပင်တစ်ပင်တွင်ကခုန်ခြင်းပါဝင်သည်။ Las Turas သည်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်သောမှော်ဘာသာရေးအကအခုန်ဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလကုန်အထိကျင်းပသောပွဲဖြစ်သည် လက်ခံရရှိအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်သဘောသဘာဝကျေးဇူးတင်ပါတယ် နေသမျှကာလပတ်လုံးစပါးရိတ်ရာကာလပေါများဖြစ်သကဲ့သို့။ နောက်ဆုံးတွင် Maremare အကကိုတွေ့ရပြီးကွယ်လွန်သူ၏ဂုဏ်အသရေကိုတွေ့ရသည်။ ဤအကများသီချင်းစာသားများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးအကသည်ရှေ့သို့နောက်သို့ခြေလှမ်းများလှမ်းနေသည်။
မကောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအယူဝါဒနှင့်မှော်အယူအဆများကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Corpus Christi ၏အခမ်းအနားတွင်တိုင်းပြည်၏ဒေသအသီးသီးမှနတ်ဆိုးများအားကခုန်ခြင်းဖြင့်ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအကကိုဖျော်ဖြေသည်။ နတ်ဆိုးများသည်လူစီဖာကိုကိုယ်စားပြုသည် ရောင်စုံအဝတ်အစားများနှင့်အသန့်ရှင်းဆုံးစက္ကမင်မင်္ဂလက်နက်ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဝတ်ဆင်။
နတ်ဆိုးများသည်စုပေါင်းအဖွဲ့များသို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၌အုပ်စုဖွဲ့သည်။ သူတို့သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်များ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်များ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောင်လက်ဖွဲ့များသယ်ဆောင်လာပြီးပွဲတော်အတွင်းလူအများစုအပါအ ၀ င်၊ သူတို့ကအနီဘောင်းဘီ၊ ရှပ်အင်္ကျီ၊ သူတို့အဝတ်အစားများပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်ခေါင်းလောင်းများ၊။ မျက်နှာဖုံးများကိုရဲရင့်သောအရောင်များနှင့်အရောင်အသွေးစုံသောဒီဇိုင်းများဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ မာရ်နတ်ဝတ်စုံသည်အမြီး၊ ကျောရိုး၊ မာရ်နတ်နှင့်မာရာကာကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လူကြိုက်များသောအစဉ်အလာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဝေသောကွဲပြားခြားနားသောအကများနတ်ဆိုးများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်အရေးကြီးဆုံးမှာ Yare, Naiguatáနှင့် Chuao တို့ဖြစ်သည်
ဗင်နီဇွဲလား၏အစဉ်အလာ၏အခြား Sardin ၏သင်္ချိုင်း
စပိန်နိုင်ငံတွင်ကဲ့သို့ပင် sardine ၏သင်္ချိုင်းသည် Carnival ပွဲတော်သံသရာကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးနောက်နှစ်တွင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ကျင်းပ ဦး မည်ဟုအာမခံသောလူကြိုက်များသည့်သရုပ်ပြဖြစ်သည်။ အဆိုပါပွဲတော်နှင့်ဆက်စပ်နေသည် ၀ က်သားနံရိုးကိုဆာဒင်းဟုခေါ်ပြီးအသားမစားရန်တားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည် ဥပုသ်ကာလအတွင်း။ ယခင်ကဤလက်ဟန်ခြေဟန်သည်အနာဂတ်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာကိုသေချာစေမည့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်ကောင်းမွန်သောငါးဖမ်းခြင်းနှင့်မွေးဖွားခြင်းကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ sardine ၏သင်္ချိုင်း၏စီတန်း၏စီတန်းအဆိုပါ sardine ၏သင်္ချိုင်းဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်သည့်လမ်းများရှင်းလင်းရေးတာဝန်ခံသူကိုအစိုးရရှေ့နေက ဦး ဆောင်သည်ယဇ်ပလ္လင်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အသုဘစီတန်းလှည့်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သူတစ် ဦး ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားသောပူဇော်သက္ကာများနှင့်အတူအလှဆင်ရထား။ ။ အဆိုပါ float အတွင်းပိုင်း အဆိုပါ Sardine ၏ပုံကိုကိုယ်စားပြုသည်.
၎င်းသည်ဇွန်လ ၂၄ ရက်နှင့်စပိန်နိုင်ငံတို့တွင်ကျင်းပခဲ့သည် သူတော်စင်၏မွေးနေ့ပွဲကျင်းပ။ ၎င်းပွဲသည်ဗင်နီဇွဲလားပြည်နယ်အားလုံးတွင်အညီအမျှကျင်းပခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကျင်းပသောပြည်နယ်များရှိယုံကြည်သူများနှင့် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်သူများစွာကိုအတူတကွစုရုံးစေသည်။ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နံနက်စောစောတွင်သူတော်စင်သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများရှိရာဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှထွက်ခွာသွားသောကြောင့်အိမ်မှထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ရောက်ရှိလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်တမြို့လုံးကိုဖြတ်သန်းသွားသောဗုံသံများကိုအတူတကွပုံတူကူးယူလာကြသည်။ သူဖြတ်သန်းစဉ်ယုံကြည်သူများ၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလက်ခံရရှိသူသည်သူတော်စင်နှင့်အတူ။
ရိုးရာဗင်နီဇွဲလားအစားအစာများသည်စားဖိုမှူးများ၏အပူမှမွေးဖွားလာခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများမှစားသောက်ဆိုင်များ၊ ပုံမှန် Caracas အစားအစာများမှမွေးဖွားလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူသည်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏အိမ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူ၏အလုပ်၏အသီးများနှင့်ချက်ပြုတ်လိုစိတ်ပြင်းပြခဲ့သည် လယ်ကွင်းများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များမှရရှိသောအစားအစာများကိုအများဆုံးရယူရန်ကြိုးစားသည်။ အမျိုးသမီးများသည်မီးဖိုချောင်ကိုစတင်တာဝန်ယူသောအခါကာရာကက်စ်အစားအစာသည်အချိုပွဲနှင့်သကြားလုံးများထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်၊ အထူးသဖြင့်စားသုံးသူများအစားအစာထုတ်လုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည့်အခါနာယကများကိုကျေနပ်အောင်ကြိုးစားသည်။
အခြားဗင်နီဇွဲလားထုံးတမ်းစဉ်လာများကဲ့သို့ပင်ဗင်နီဇွဲလားအစားအစာ ကအရမ်းစပိန်ကလွှမ်းမိုးနေသည်, အာဖရိကန်နှင့်ဤကိစ္စတွင်လည်းဌာနေတိုင်းရင်းသားများ။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများမှာပြောင်းဖူးသဲများ၊ အနက်ရောင် sado များ၊
အဆိုပါ San Sebastiánတရားမျှတသော
San Sebastián International Fair သည်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏အရေးအပါဆုံးအစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဇန်နဝါရီလဒုတိယနှစ်ပတ်အတွင်းတာကာရာပြည်နယ်ရှိ San Cristóbalမြို့၌ကျင်းပသည်။ ဒါ့အပြင် ဗင်နီဇွဲလား၏ Bullfighting တရားမျှတသောအဖြစ်လူသိများ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ bullfighters များကိုပျော်မွေ့ရန်နိုင်ငံ၏အနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ်သူများအားအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
ဤပြပွဲသည်နိုင်ငံခြားသား visitors ည့်သည်အမြောက်အများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အပြင်အတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်သည် ကြီးစွာသောဖျော်ဖြေရေးဖြစ်နိုင်ခြေပေးထားပါတယ် Táchiraပြည်နယ်တွင်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်နိုင်ငံတကာဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းကျောင်းသူများအပြင်နိုင်ငံ၏ထူးချွန်သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလည်းဒီပွဲကိုတက်ရောက်ကြသည်။
Tacarigua မှ Papelones
Tacarigua သည် Margarita ကျွန်းပေါ်ရှိငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအသိုင်းအဝိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသူတို့သည်ပြည်တွင်းသတင်းများအတွက်သတင်းစာထုတ်ဝေမှုနှင့်အခြားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများသို့ရောင်းချခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါpapelón ကြံကြံမှလာသည် conical အသွင်သဏ္ဌာန်ရှိပါတယ်20 စင်တီမီတာအမြင့်နှင့် 10 မှ 15 စင်တီမီတာတစ်အခြေစိုက်စခန်းတိုင်းတာသည်။ ၎င်းကိုချောကလက်သို့မဟုတ်ကော်ဖီကိုချိုစေပြီးသံပရာရည်နှင့်ချုပ်။ ဖြစ်စေ guarapos ဖြစ်စေသည်။
သန့်ရှင်းသောရက်သတ္တပတ်၏ရောက်ရှိခြင်းနှင့်အတူစပိန်နိုင်ငံ၌ကဲ့သို့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများသည်လူသားအားလုံးအတွက်ဘုရားသခင့်သားပြုခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုကိုမှတ်မိရန်အတွက်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ပြုမူခြင်းများပြုလုပ်ရန်အသင်းတော်များသို့သွားကြသည်။ သို့သော်ဗင်နီဇွဲလား၌, လည်းရှိပါတယ် ခရစ်တော်၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များကိုမြေကြီးပေါ်၌ဖော်ပြသောလူထုကိုယ်စားပြုမှု။ ဤဖော်ပြချက်များတွင်ခရစ်တော်၏စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုနှင့်သေခြင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ ယေရှုခရစ်၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည့်မြင်ကွင်း ၁၅ ခုပါသောမြင်ကွင်းများ။
ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်၏စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြခြင်းနှင့်သေခြင်းကိုကိုယ်စားပြုခြင်းသာမဟုတ်ပါခရစ်တော်အားဂျေရုဆလင်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ မုန့်များပွားခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောညစာစားပွဲ၊ သံလွင်ဥယျာဉ်၊ ဗီယာလက်ဝါးကပ်တိုင်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊
ယုဒ၏မီးလောင်ရာကိုကိုယ်စားပြုသောဗင်နီဇွဲလား၏အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များအပေါ်သူတို့၏မကျေနပ်မှုနှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်သူတို့၏အပြုအမူသို့သော်၎င်းသည်နောက်နှစ်အတွက်သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ဥပုသ်ကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ ဤမီးလောင်မှုများ၏အကြောင်းရင်းမှာယုဒ၏ခရစ်တော်အားသစ္စာဖောက်မှုကိုသတိရရန်ဖြစ်ပြီးသူ၏လူများအပေါ်ဇာတ်ကောင်၏သစ္စာဖောက်မှုကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ လောင်ကျွမ်းသောယုဒအရုပ်သည်အ ၀ တ်အစား၊ ဟောင်းနွမ်းသောအ ၀ တ်များ၊ ဟောင်းနွမ်းသောအဝတ်စုတ်များနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Bud ဦး ထုပ်
ဘူး ဦး ထုပ်များမှာ Margarita ကျွန်း၏အဓိက ၀ င်ငွေအရင်းအမြစ်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောအသွင်အပြင်ရှိသော်လည်းဤ ဦး ထုပ်များကိုလက်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ၊ လုပ်နိုင်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ ဤ ဦး ထုပ်အမျိုးအစားသည်ကြာမြင့်စွာတိုင်းပြည်နှင့်ကာရေဘီယန်ကျွန်းများတွင်အလွန်လက်ခံမှုရှိခဲ့သော်လည်းမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းထုတ်လုပ်မှုမှာနည်းနည်းလျော့နည်းသွားပြီးလက်ရှိလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘူးသီးများနှင့်အတူ ဦး ထုပ်များအပြင်အိတ်များ၊ ကော်ဇောများ၊
ဆေးရွက်ကြီးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏အနုပညာသည်ဗင်နီဇွဲလားမိသားစု၏အစဉ်အလာတစ်ခုအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ဆေးရွက်ကြီးထုတ်လုပ်မှုနောက်ကျောထိုင်ခုံကြာပါသည်။ ဆေးရွက်ကြီးထုတ်လုပ်မှုကိုကာလီဖိုးနီးယားကိုခွဲပြီးခွဲထားပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆေးရွက်ကြီးများအမြောက်အများရှိပြီးပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုကိုရည်ရွယ်သည်။ ယခင်ကဆေးရွက်ကြီးကိုတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ရောင်းချခဲ့သော်လည်းလျှော့ချမှုလျှော့ချခြင်းကြောင့်၎င်းအားစက်ရုံအများစုစိုက်ပျိုးသောပြည်နယ်နှင့် Los Millane ရှိရပ်ကွက်များတွင်သာသုံးစွဲသည်။
ဗင်နီဇွဲလား artisan အစဉ်အလာ
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သည့်ရိုးရာလက်မှုပစ္စည်းထုတ်ကုန်များထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ အစားအစာ၊ သောက်စရာ၊ ကြွေထည်၊ ကဲသာရိ၊ အရက်၊ စာရေးကိရိယာ၊ ပန်းချီကားများ၊ လက်မှုပညာအသုံးအနှုန်းတွေကိုမြို့သားခွင့်ပြုပါ ဗင်နီဇွဲလား၏ဘဝနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၏လမ်းကိုပြသ.
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်စမတ်ရောက်ခါနီးတွင်ဗင်နီဇွဲလားရိုးရာအစဉ်အလာတစ်ခုမှာဗင်နီဇွဲလား၏နေရာတိုင်း၌ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်ယေရှုရောက်ရှိခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်သည်။ ဒီဇင်ဘာလအစတွင်လာမည့်နေ့ရက်များ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရပြီးနိုင်ငံ၏နေရာအနှံ့အပြားတွင်ယေရှု၏ကလေးငယ်ရောက်ရှိလာခြင်းကိုဂုဏ်ပြုသောအခမ်းအနားများ၊ စားသောက်ပွဲများ၊ ပွဲတော်များသည် ပို၍ များပြားလာသည်။ သို့သော်ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြာဝcosာ၌ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကိုဖေဖော်ဝါရီလအထိတိုးချဲ့နိုင်သည့်ခရစ်စမတ်အပိုဆုကြေးများ၊ နွားစားခွက်များ၊ အိတ်များ၊ ခရစ်စမတ်ခရစ္စမတ်ပွဲတော်များ၊ ချီတက်ပွဲများ၊ စကိတ်စီးများ၊ သန့်ရှင်းသောအပြစ်ကင်းစင်သည့်နေ့၊ မာဂုပညာရှိတို့၏ရောက်ရှိခြင်း၊
ဒီအရာအားလုံးကိုမင်းကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဗင်နီဇွဲလားအစဉ်အလာ သငျသညျပိုပြီးလိုခဲ့လျှင်, ဒီမှာကဒီမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဖတ်နိုင်သည် ဗင်နီဇွဲလားအတွက်အကောက်ခွန် ပိုပြီးပုံမှန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဗင်နီဇွဲလား၏အစဉ်အလာ
Hilda DE MIRABAL ဟုသူကပြောသည်
ငါ့တိုင်းပြည်ဗင်နီဇွဲလားကိုချစ်တယ်၊ လှတယ်၊ ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုငြူစူစရာမလိုဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာအားလုံး၊ ရှုခင်းတွေ၊ ကမ်းခြေတွေ၊ တောင်တန်းတွေ၊ မြစ်တွေစသဖြင့်ပေါ့။ ငါတိုင်းပြည်ကိုငါချစ်တယ်၊ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေနဲ့ဓလေ့တွေကိုနှစ်သက်တယ်
hildA DE MIRABAL သို့ပြန်ပြောပါ
ဘရိုင်ယန် ပင်တို ဟုသူကပြောသည်
brian pinto သို့ပြန်သွားရန်
leanyeli varela guillen ဟုသူကပြောသည်
leanyeli varela guillen အားပြန်ပြောပါ
မင်းသမီး Emma SANCHEZ GARCIA ။ ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လိုငါတို့ရပ်တန့်ထားသောTáchiraလှပသောနေရာများမှဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းကင်၏ထိပ်တန်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၊ မည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှမနာလိုစရာမလိုပါ၊ အကြောင်းမှာအရာအားလုံး၊ ရှုခင်းများ၊ ကမ်းခြေများ၊ တောင်တန်းများ၊ စသည်တို့ ငါတိုင်းပြည်ကိုငါချစ်တယ်၊ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေနဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုနှစ်သက်တယ်။ La Grita မှ။
EMMA SANCHEZ GARCIA သို့စာပြန်ပါ။
အလင်း angelinys ပန်းပွင့် prada ဟုသူကပြောသည်
ဗင်နီဇွဲလားသည်အလွန်ကြီးမားသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုများစွာတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပျော်မွေ့နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။ မြစ်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ ပန်းခြံများ၊ တောင်များနှင့်အခြားအရာများစွာရှိသည်ဗင်နီဇွဲလားတွင်၎င်း၏အလံ၊ နိုင်ငံတော်သီချင်းနှင့်ဇာတိမြေတစ်ခုဖြစ်သည် ဗင်နီဇွဲလားမှာမင်းကအစားအစာမရနိုင်ဘူး၊ သတင်းသာမာန်လုယက်မှုကိုပဲကြားရလိမ့်မယ်၊ ငါ့တိုင်းပြည်ကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားမယ်၊ ငါသိတယ်နောက်ပြန်မဟုတ်ပေမယ့်ရှေ့ကိုသွားတယ်၊ ရွှေအတွက်တောင်မှငါပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဗင်နီဇွဲလား။
luz angelinys flores prada အားပြန်ကြားပါ
ဗင်နီဇွဲလားသည်အလွန်ကြီးမားသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုများစွာတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပျော်မွေ့နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။ မြစ်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ ပန်းခြံများ၊ တောင်တန်းများနှင့်အခြားအရာများစွာရှိသည်ဗင်နီဇွဲလားတွင်၎င်း၏အလံ၊ သီချင်းနှင့်သံသယရှိပြီးဗင်နီဇွဲလားတွင်သင်ရှိနေသောဇာတိမြေ အစာမစားနိုင်သည့်အပြင်သတင်းများကြားရရုံမျှဖြင့်ခိုးခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်သည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သိသည်။ နောက်သို့မဟုတ်၊ ရှေ့သို့မဟုတ်ဘဲထိုအတွက်သာဗင်နီဇွဲလားကိုရွှေတောင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်ဗင်နီဇွဲလား၊ လှပတဲ့ကောင်းကင်ပြာထိပ်၊ ငါတို့နိုင်ငံအတွက်ဘာမှမငြူစူစရာမလိုပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာအားလုံး၊ ရှုခင်းတွေ၊ ကမ်းခြေတွေ၊ တောင်တန်းတွေ၊ မြစ်တွေစသဖြင့်ပေါ့။ ငါတိုင်းပြည်ကိုငါချစ်တယ်၊ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေနဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုနှစ်သက်တယ်။ La Grita မှဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကိုကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးသည်။ လှပသည်။ မည်သည့်တိုင်းပြည်ကိုမှငြူစူစရာမလိုပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတွင်အရာအားလုံး၊ ရှုခင်းများ၊ ကမ်းခြေများ၊ တောင်တန်းများ၊ မြစ်များစသဖြင့်ရှိသည်။ ငါတိုင်းပြည်ကိုငါချစ်တယ်၊ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေနဲ့ဓလေ့တွေကိုနှစ်သက်တယ်
Keudys Garcia ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်နိုင်ငံဟာအကောင်းဆုံးပါ၊ အကောင်းဆုံးဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေရှိပါတယ်
Keudys garcia သို့ပြန်သွားပါ
veronica jaramillo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်Verónica Jaramillo နှင့် Tigres ပါ။ ဒီသင်တန်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ စာမျက်နှာအားလုံးဟာအယူအဆတော်တော်များများနဲ့တူတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
verónica Jaramillo ကိုပြန်ကြားပါ
zoraida ramarez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောအခြေအနေများရှိလင့်ကစားဗင်နီဇွဲလားသည်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားချစ်မြတ်နိုးပြီး ဆက်လက်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်။ ၎င်း၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အစဉ်အလာများ။ ကျွန်ုပ်သည်အင်ဒီးလူမျိုး ဖြစ်၍ Gochos ကဲ့သို့ကောင်းသော၊
zoraida ramarez အားပြန်ပြောပါ
Jon Mayorca ဟုသူကပြောသည်
jon mayorca အားပြန်ကြားပါ
ငါ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ အခုအချိန်မှာငါတို့သိပ်မကောင်းဘူးဗင်နီဇွဲလားကဒီတိုင်းပြည်ကနေထွက်သွားမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါဟာငါ့နိုင်ငံနဲ့အတူရှိနေတယ်။ ငါတို့ဟာစစ်သည်တော်တွေဖြစ်ကြတယ်၊ ငါတို့ကအကုန်လုံးအကုန်ခံမယ်။
ဂျိုဟန် gonzalez ဟုသူကပြောသည်
johana gonzalez အားပြန်ပြောပါ
yonelkis ugas ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီဆောင်းပါးကိုကြိုက်တယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ငါအရမ်းနှစ်သက်တယ်။ မင်းကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ # Amovenezuela
yonelkis ugas အားပြန်ကြားပါ
Havana မှ Varadero သွားနည်း